Dzidza nezve Zuva naJonathon Shwartz mune iyi huru Bvunzurudzo | Martech Zone
Dzidza nezve Zuva naJonathon Shwartz mune iyi huru Bvunzurudzo
Mugovera, January 20, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Gore nehafu yapfuura Ini zvakaitika kugara pamusoro petafura kubva Jonathon Schwartz pakutanga Mashup Camp uye aisaziva kuti aive ani.
Yangu CMO, Chris Baggott, akamunongedzera kwandiri ndokubva tagara ndokumutarisa achibvunzwa neCNET kwemamwe angangoita maminetsi makumi maviri. Ndakafadzwa pakarepo. Chinhu chekutanga chaakaita kusaidhonza zvibhakera uye kutaura kune vanyori chaivo nezve zvimwe zvinyorwa izvo CNET anga anyora uye sei zuva yakamirirwa zvisizvo. Akanga aine hutsinye kumberi navo uye asingatore zvibhakera. Ndakaona vatungamiriri vazhinji vachipa vezvenhau, saka izvi zvaive zvakanaka kuona.
Mune ino ScobleShow gara pasi ne Robert Scoble, Jonathon anotaura nezveSuva, Java, iPhone, Mircrosoft uye nemimwe misoro yenyaya dzichangoburwa. Ane hushamwari, anoziva uye akavhurika zvisingaite.
Imwe yemashoko makuru ari pano ndeyekuti chiratidzo chinotungamira cheZuva chekubudirira ndiko kunyatsofara kwevashandi vavo. Jonathon anodada ne'boomerangs '... kureva kuti, vashandi veSun vakasiya asi vava kudzokera kukambani. Anotaura zvakare kune vazhinji vevanotaura zvisizvo kunze uko nezveZuva semutengo wekupinda uye marezinesi. Wanga uchiziva here kuti Sun anoshandisa $ 2 bhiriyoni kutsvagisa nekusimudzira gore rega rega? Kana kuti Java ndiyo inonyanya kuzivikanwa tech logo?
Saiye 'Microsoft-akura' tekinoroji… ndagara ndichishandira makambani makuru akavakirwa paMicrosoft network nemaseva, ndinofungidzira mhinduro yangu chete kunaJonathon naSuva ndeyekuti ini chokwadi handivazive zvakakwana. Ndiri muIndiana… kwete muSilicon Valley. Ini handifanirwe kuenda kune dzakawanda maindasitiri zviitiko. Tiri kambani yekumhanyisa-mhanyisa yekufambisa iri munzira dzechitima dzeMicrosoft uye haizoburuke chero nguva munguva pfupi… kana zvichikwanisika. Ini pachangu, ndinoda LAMP asi ruzivo rwangu navo ndirwo chete rwandakaita ndega nekutambira, kusimudzira, WordPress, uye MAMP. Ini ndakashanda neJava webhu masevhisi makore mashoma apfuura uye yakashanda zvine hungwaru, asi isu hatina kumbobvira taita nekuti taigona zvakare kuita webhu webhu neMicrosoft matekiniki - ayo edu mashandiro akavakirwa.
Mhinduro kubva kumusimudziri pane saiti yaJonathon inotaura chimwe chinhu chakafanana… haakwanise kuyedza naSolaris nekuti haisi sarudzo yekuti atange 'kutamba' pamba.
Heano makuru angu ane mvere ane hushingi ezuva. Ndiri kureva izvi neruremekedzo rwese rwakakodzera, wadii kuisa mari yavo ipo pamuromo pavo uye pachena uye vakasununguka kubvunza nevatengi ve Enterprise Microsoft pakuvandudza mashandisiro avo muJava paSolaris. Haisiyo sarudzo yekuti titarise kune imwe nzvimbo mhinduro ... kunyangwe kana chengetedzo iri kumagumo emugwagwa, hatina nguva yekutyaira tichidzika nemugwagwa.
Ini handina mubvunzo kuti zvikumbiro zvedu zvinogona kuita zvirinani, kuyera zviri nyore, mitengo yedu inogona kudzikiswa, uye sevhisi inovandudzika neSun. Asi tinoita sei kufamba uku pasina kuremadza kambani yedu kana kunonoka kusimudzira kunodiwa kukwikwidza mumusika wedu? Tine zviuru zvishanu zvevatengi, vashandisi zviuru gumi nezvishanu uye mabhiriyoni ezvekutengesa mukota yega yega. Mamwe makambani anoita shanduko idzo here? Jonathon, nguva inotevera paunenge uri muIndipolis… ndingafarire kudya masikati uye ndinokutora parwendo rwekambani yedu.
Imwe tsamba yekupedzisira… Jonathon anokurukura nezve chiitiko chepedyo-nerufu chakachinja hupenyu hwake. Nechemumoyo, ini handina kumbobvira ndapfuura ipapo - asi kuva nevana kwakava nenzira yakafanana pandiri. Zvakare… vhidhiyo yacho yakatemwa pakupedzisira?
OSX: Gadzirisa yako Terminal Window
Jan 23, 2007 pa 4: 56 AM
Ndatenda nematauriro emutsa. Vhidhiyo yakagurwa pamagumo. Iyo tepi yaive nekukundikana kukuru ipapo saka iwe wakarasikirwa masekondi mashoma uye iyo "yekutenda, bhabhadzira" mhando yechinhu. Ndine urombo pamusoro pazvo. Kunze kweanenge mazana mabvunzurudzo andakaita iyo ingori yechitatu nguva kutadza kwetepi kwakanganisa chimwe chinhu.
Jan 23, 2007 pa 9: 58 AM
Wow - ndatenda nekushanya uye nekutaura Robert! Yaive inonakidza kubvunzana iyo yakanyatso kuvhura maziso angu kuna Sun.